Ogaden News Agency (ONA) – Aragtida akhristaha – Sanadguuradii JWXO ee 28aad iyo sansaanta xoriyada Ogadenya
Aragtida akhristaha – Sanadguuradii JWXO ee 28aad iyo sansaanta xoriyada Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ August 18, 2012
Maanta waa malin ku wayn S.Ogadenya meel walba ooy jogan, waa malin xusuus mudan oo qofkii wadankiisa iyo xoriyadda jecel ku weyn. Waa maalinta umadeena aayaheda laga taliyay, tubta dhabta ahna la qaadsiyay waxay tabanhaysayna loo tilmaamay tafantoofkiina ay ka baxeen ay u diyaar garobeen in ay iska qaadan duliga daashaday. Su,ashu waxay tahay maalinta noocas ah mayna xusuus mudnayn ? Maalinta saas oogu wayn shacabka Ogadenya ayaa maanta 28jir sirtay waa malintii dhidibada loo qotomiyay JWXO. Laaakin ma ah maalintii uu halganka hubaysan bilawday. Maalinta ayada ah uma baahno sharax dheeraad ah, lakiin xaalku waa is xusuusin maadama aynu wada garan hayno malintii dhidibada loo tagay JWXO.
Waxaan rabaa in aan si kooban ooga hadlo guulaha uu gadhay halganka ay jabhadu kula jirto gumaysiga Adis ababa.
Halgan walba oo gumaysi lagula jiraa wuxuu soo maraa maraaxil kala duduwan oo in teeda badan ku salaysan dhib iyo rafaad. Sidaa darted JWXO waxay soo martay xaalad adag oy kaga soo gudubtay sabir, iskutashi iyo Eebe talo saarad, waana mida kaliya ee lagaga bixi karo markay dhibaato kugu habsato. Dhibkii noocas ahaa markay u sabirtay JWXO guulo ayay gaadhay Eebe ayaana mahada iska leh.
Waxaan lawada soconaa in uu gumaysigu marayo marxaladii oogu adkayd ee abid soo martay. Waxaana ka mid ah dhibaatooyinka haysta gumaysiga kuwan;
1- Dhanka dhaqaalaha waxaan ognahay in gumaysiga dhaqalihisii hoos u socdo. Sicir barar iyo dhaqaale la,aan badan markay la soo daristay lacagtii reer galbeedkuna waxba qaban wayday in ay ku qasabtay in dawarsi labilaabo dal iyo dibadba, oo shacabkii masakiinta ahaa ee Ogadenya iyo Somalida la boobo.
2- Siyaasada arimadibada. Dunidii oo dhan ayaa waxay u aqoonsatay koox dhiigyacab ah markii dunida la horkeenay cadeymo muujinaya dhibaatada ay ku hayaan shacabka S.Ogadenya iyo qawmiyadaha kale ee itoobiya kadib taasoo dhalisay in uu qirinqiir galo dhaqaalihii lasiin jiray gumaysiga looguna hanjabo in laga joojin hadayna wax ka badalin dhibka ay ku hayaan shucuubta ay xukumaan. Waxaa kale oo fadeexo ku noqotay markay ururadii bulshada ee S.Ogadenya meel walba oo ay tagaan banaanbax kala hortagaan taas oo ay ku cadayn hayaan xasuuqa shacabkooda lagu hayo.
3- Dhanka gudaha. Markay ciidamadodii u adkaysan wayeen gumaca halgamayasha JWXO waxaa ka dhalatay in ay sameeyan amar diido, carar, iska hor imaad. Kadinba waxay isku dayeen in ay dadka shacabka ah een waxba galabsan qamciyaan taasna shacabkii waxay ka sii qaaden adkaysi iyo gadood ay ku garab istagayaan wiilashooda nafta u huray difaaca shacabka. Yaab iyo amakaak. Yaa xukumi jiray dadkan aan dabaca lahayn, dulaysiga aan ogalayn. Dunida laguma arag dadkan oo kale. Waa ereyada maskaxdooda ka guuxaysa dharaar iyo habeen.
Waxaa ka dhashay guul darada gumaysiga ku habsatay in ay soo dadajiso burburkisii waana tataagan manta, muuqatana shaki la,aan, buburkuna siyaaba badan ayuu ku yimadaa. Tusaala ahaan wadamada Africa amaba Carabta is badalo baladhan ayaa ka dhacay waxuuna ku yimid siyaaba kala duwan. Dawladaha qaar wuxuu ku yimid banaanbaxyo nabadgalya ah sida Masar, Tunis, qaarna afganbi sida Malawi. Itobiyana waxuu ku iman doona in sha Alaah zanawi oo dhinta ka dibna ay kala yaacaan. Dhibka haysta haduu bakhtiyo Males waxaan aminsanahay in ayna wayli wayl ka raacaynin maxaa yeelay waa dawlad ku dhisnayd kaligii talisnimo, waa dawlad dulmi ku dhisnayd.
Arimahaasoo dhan waxay cadayn u tahay guulaha lagadhay iyo gabagabada gumaysiga. Waxaana gaabiga soo gashay (sansaanta xoriyada Ogadenya). Gunta gunaanadka waxaan leeyahay shacabka Ogadenya waxyar ayaa idiin hadhaye adkaysta. In shaa Alaah durba waad gaadhaysan xoriyadii aad inta badan higsanaysene, waadna dheefsan doontana dhulkiina (dhib la’aan dheef lama gaadho).